Faraantiga Dabka: waxa uu yahay, sifooyinka, dhaqdhaqaaqa iyo wax ka badan | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 06/01/2022 10:00 | Geology
Meerahan, meelaha qaar ayaa ka khatar badan kuwa kale, markaa magacyada meelahaas waa kuwo aad u muuqda oo aad u maleyneyso in magacyadani ay tilmaamayaan waxyaabo khatar ah. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadli doonaa Giraanta Dabka ka Pacific. Magacani waxa uu tilmaamayaa aagga ku hareeraysan baddan, halkaas oo dhulgariirrada iyo hawlaha foolkaanaha ay aad ugu badan yihiin.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax walba oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato giraanta dabka, meesha ay ku taal iyo waxa lagu garto.
1 Waa maxay faraantiga naarta
3 Dhaqdhaqaaqa foolkaanaha ee giraanta dabka
4 Wadamada ay soo maraan
Waa maxay faraantiga naarta
Goobtan kabo-fardaha u samaysan ee aan ka ahayn goob wareeg ah, tiro badan oo dhulgariir iyo dhaqdhaqaaqyo foolkaanooyin ah ayaa la duubay. Tani waxay aagga ka dhigaysaa mid aad khatar u ah masiibada suurtagalka ah awgeed. Giraantu waxay ka bilaabataa New Zealand ilaa dhammaan xeebaha galbeed ee Koonfurta Ameerika, oo dhererkeedu dhan yahay in ka badan 40.000 oo kilomitir. Waxa kale oo ay maraa dhammaan xeebaha Bari Aasiya iyo Alaska, iyada oo sii marta qaybta waqooyi bari ee Waqooyiga iyo Bartamaha Ameerika.
Sida ku xusan tectonics saxan, suunkani wuxuu calaamadiyaa cidhifka meesha Baasifigga Plate-ku ku wada nool yahay taarikada tectonic kale ee ka kooban waxa loogu yeero qolof. Sida aag dhulgariirrada soo noqnoqda iyo dhaqdhaqaaqa foolkaanaha, waxaa loo kala saaraa inay tahay aag khatar ah.
Giraanta Dabka ee Baasifiga waxaa sameeyay dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic. Taarikada ma go'an, laakiin si joogto ah ayay u socdaan. Tani waxay sabab u tahay joogitaanka convection ee marada. Farqiga u dhexeeya cufnaanta maaddadu waxay keentaa inay dhaqaaqaan oo waxay sameeyaan taarikada tectonic dhaqaaqo. Sidan, barakicin dhowr sentimitir sannadkii ayaa lagu gaaraa. Kamaanaan dareemin marka la eego qiyaasta bini'aadmiga, laakiin haddii aan qiimeyno wakhtiga juqraafiga, wuu soo baxayaa.
In ka badan malaayiin sano, dhaqdhaqaaqa taarikadani waxay kicisay samaynta giraanta Dabka ee Baasifigga. Taarikada tectonic gebi ahaanba midba midka kale kuma midowdo, laakiin waxaa jira meelo bannaan oo u dhexeeya. Badanaa waxay dhumucdiisu dhan tahay 80 kiiloomitir waxayna ku guuraan koofiyado ku dhex jira go'a aan soo sheegnay.
Marka taarikadani dhaqaaqaan, waxay u muuqdaan inay kala tagaan oo ay isku dhacaan midba midka kale. Iyadoo ku xiran cufnaanta mid kasta, mid ayaa sidoo kale ka dul quusi ​​kara kan kale. Tusaale ahaan, cufnaanta taarikada badda ayaa ka weyn ta taarikada qaaradda. Sababtaas awgeed, marka ay laba saxan isku dhacaan, waxay ku hor quustaan ​​saxanka kale. Dhaqdhaqaaqa iyo isku dhaca taarikada ayaa soo saaray dhaqdhaqaaqyo juqraafiyeed xooggan oo ka jira cidhifyada taarikada. Sidaa darteed, meelahan waxaa loo arkaa inay si gaar ah u firfircoon yihiin.
Xuduudaha saxanka ee aan helno:
Xadka isku dhafka. Xuduudahan gudahooda waxaa ku yaal meelo ay taarikada tectonic isku dhacaan midba midka kale. Tani waxay keeni kartaa in saxanka cuslaa uu ku dhaco saxanka fudud. Sidaas ayaa waxa loo yaqaan aagga subduction. Mid saxan ayaa kan kale hoos u dhigaya. Meelahan ay tani ka dhacdo, waxaa jira volcano badan, sababtoo ah hoos-u-dhigistani waxay sababtaa in magma-gu uu ka soo kaco qolofka dhulka. Sida cad, tani ma dhici doonto isla markiiba. Tani waa geeddi-socod qaadata balaayiin sano. Sidan ayaa loo sameeyay qaansada foolkaanaha.
Xuduudaha kaladuwan Waxay si sax ah uga soo horjeedaan isku-darka. Inta u dhaxaysa taarikadan, taarikada ayaa ku jira xaalad kala-saar. Sannad kasta waxay kala soocaan wax yar oo dheeraad ah, samaynta oogada badda cusub.
Xadka isbedelka. Xakamayntan, taargooyinku ma kala go'aan, iskumana xidhna, waxay si siman u siman yihiin ama toosan yihiin.
Meelaha kulul. Waa gobollo heer kulka marada si toos ah uga hooseeya saxanka uu ka sarreeyo gobollada kale. Xaaladahan, magma kulul ayaa kor u kici karta oo soo saari karta volcano firfircoon.
Soohdimaha saxanada waxaa loo tixgeliyaa meelaha ay juqraafi iyo dhaqdhaqaaqa foolkaanadu ku urursan yihiin. Sidaa darteed, waa wax iska caadi ah in volcano iyo dhulgariir badan ay ku urursan yihiin giraanta Dabka ee Baasifigga. Dhibaatadu waa marka dhulgariir ka dhaco badda oo uu keeno tsunami iyo tsunami u dhigma. Xaaladahan oo kale, khatarta ayaa kordheysa ilaa heer ay u horseedi karto masiibooyinka sida kuwii Fukushima ee 2011.
Dhaqdhaqaaqa foolkaanaha ee giraanta dabka
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in qaybinta foolkaanaha dhulka ay tahay mid aan sinnayn. Taas lidkeeda. Waxay qayb ka yihiin aagga weyn ee dhaqdhaqaaqa juqraafiga. Haddi aanay jirin hawshaas, foolkaanadu ma jirayso. Dhulgariirrada waxaa sababa isu-ururinta iyo sii daynta tamarta dhexdooda. Dhulgariiradaasi waxay aad ugu badan yihiin wadamadeena Dabka Baasifiga.
Taasina waa tan Giraanta Dabka waa kan xoogga saaraya 75% foolkaanaha firfircoon ee meeraha oo dhan. 90% dhulgariirka ayaa sidoo kale dhaca. Waxaa jira jasiirado iyo jasiirado aan la soo koobi karin oo wada jira, iyo sidoo kale foolkaanooyin kala duwan, oo ay ka jiraan qaraxyo rabshado wata. Dhismooyinka foolkaanaha sidoo kale aad bay u badan yihiin. Waa silsilado foolkaanooyin ah oo ku yaal dusha sare ee taarikada hoos-u-dhigga.
Xaqiiqadani waxay dad badan oo adduunka ku nool ka dhigaysa inay la yaabeen oo ka argagaxaan aaggan dabka. Tani waa sababta oo ah awoodda falalkoodu waa mid aad u weyn waxayna sababi karaan masiibooyinka dabiiciga ah ee dhabta ah.
Wadamada ay soo maraan
Silsiladdan ballaaran ee tectonic waxay ka kooban tahay afar dhul oo waaweyn: Waqooyiga Ameerika, Ameerikada Dhexe, Koonfurta Ameerika, Aasiya, iyo Oceania.
Waqooyiga Ameerika: Waxay ka socotaa xeebta galbeed ee Mexico, Maraykanka, iyo Kanada, iyada oo sii socota ilaa Alaska, oo ku biirta Aasiya ee Waqooyiga Baasifigga.
Bartamaha Ameerika: waxaa ka mid ah dhulalka Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala iyo Belize.
América del SurDhulkan waxa uu ka kooban yahay ku dhawaad ​​dhammaan Chile iyo qaybo ka mid ah Argentina, Peru, Bolivia, Ecuador iyo Colombia.
Aasiya: waxa ay ku teedsan tahay xeebaha bari ee Ruushka waxana ay sii martaa wadamada kale ee Aasiya sida Japan, Philippines, Taiwan, Indonesia, Singapore iyo Malaysia.
Oceania: Solomon Islands, Tuvalu, Samoa iyo New Zealand waa dalal ku yaala Oceania halkaas oo uu ka jiro giraanta dabka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto Giraanta Dabka ee Baasifigga, dhaqdhaqaaqiisa iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Giraanta Dabka
Volcanoes ee Iceland